JoojiCOVID-19 Soosaarayaasha antibiyootikada antibiyootikada soosaarayaasha iyo alaab-qeybiye | Immuno
Loo Adeegsaday COVID-19 Dhex-dhexaadinta Antibody Imtixaanka Degdega ah
Xirxirida 20 xirmooyinka tijaabada / Sanduuqa wax lagu rido 50 sanduuq / Kartoon Cabbirka Kaartonka: 64 * 44 * 39cm 1Test kit / Sanduuqa wax lagu rakibo 200 oo sanduuq / Kartoon Xajmiga Kaartonka ： 40 * 36.5 * 33.5cm
SARS-CoV-2 Dhexdhexaadinta Antibody Rapid Test (COVID-19 Ab) waxaa loogu talagalay in lagu ogaado unugyada difaaca jirka ee SARS-CoV-2 ama tallaaladeeda. Barootiinnada ACE2 waxaa lagu dahaadhay aagga xariiqda baaritaanka iyo borotiinka RBD oo lagu xiray walxaha tilmaamaya. Inta lagu jiro baaritaanka, haddii ay jiraan unugyada difaaca jirka ee 'SARS-CoV-2', waxay ku falcelin doontaa borotiinka 'RBD-particle conjugate' oo kama jawaabi doono borotiinka horay loo duubay ACE2. Isku darka ayaa markaa u guuraya kor u kaca xuubka chromatographically ficil ficil leh mana uusan qabsan doonin antigen horay loo soo duubay.
SARS-CoV-2 Dhexdhexaadinta Antibody Rapid Test (COVID-19 Ab) waxaa ku jira borotiinka RBD-da la duubay. Borotiinka ACE2 wuxuu ku dahaadhan yahay gobolka qadka tijaabada.
Xasaasiyadda Caafimaadka, Qaaska iyo Xaqiijinta
SARS-CoV-2 Dhex-dhexaadinta Antibody Rapid Test (COVID-19 Ab) ayaa lagu qiimeeyay tijaabooyin laga soo qaaday dadweynaha kiisaska wanaagsan ee caafimaad iyo kiisaska caafimaadka qaba. Natiijooyinka waxaa xaqiijiyay RT-PCR.
COVID-19 Qalabka Tijaabada Degdega ah
Habka Dareenka heerka dahabka (PCR) Natiijooyinka guud
SARS-CoV-2 Dhex-dhexaadintaKa hortagga RapidTest (COVID-19 Ab） Natiijooyinka Wanaagsan Taban
Wanaagsan 49 0 49
Taban 5 120 125
Wadarta Natiijada 54 120 174
Duulimaadka hawadu waa habka caadiga ah ee amarrada tiro aan ka badnayn 200000pcs. Warqadaha sida DHL waa habka ugu habboon ee amarrada yar yar. Haddii cabbirka dalabku ka sarreeyo 1000000pcs, axdiga hawada ama gaadiidka badda ayaa la soo jeedinayaa.
Waxaa jira siyaasad dhoofinta qalabkan tijaabada degdega ah ee COVID-19 ee dowladda. Waxaa la soo jeedinayaa in laga tago ugu yaraan 7 maalmaha shaqada nidaamka rasmiga ah ee lagu codsanayo Kastamka kahor rarka. Xafiiska Kastamku waa inuu u oggolaadaa inuu dhaafo ka dib markay hubiyaan Shahaadada Ansixinta ee Qodobbada Gaarka ah ee ay soo saartay xubinta caafimaadka iyo karantiilku. Xaqiijinta amarka hore ee la saxeexay ee macaamiisheenna sharafta leh ayaa kaa caawin doonta in la soo gaabiyo habraacyada.
Wakiilkayaga gaadiidka muddada-dheer lagu kalsoon yahay ayaa ah
Warqad: DHL (www.cn.dhl.com)
Soo gudbiyaha duulimaadka hawada: SINOTRANS (www.sinoair.com)
Su'aasha 1aad: Ma heli karaa shay-baarka intaanan dalban?
J: Immunobio waxay siisaa muunad cidda jeceshahay inay bixiso qarashka xamuulka. Amarka tijaabada muunada waa la soo dhaweynayaa. Xaaladaha qaarkood, tijaabooyin bilaash ah ayaa la heli karaa.
Su'aasha 2aad: Sidee ku saabsan MOQ?
J: Nidaam rasmi ah, 10000pcs of COVID-19 tijaabada degdega ah ayaa ugu yar. Amarka tijaabada, 1 kartoon (1000 kumbiyuutar) waa tirada ugu yar ee dalabka.
Hore: Tijaabada degdega ah ee 2019-ncov coronavirus Antigen
Xiga: SARS-CoV-2 Dhex-dhexaadinta antibody antibody Rapid
coronavirus Dhexdhexaadinta Antibody Rapid Test
COVID-19 Antibody Degdeg ah